अरविन्द पोट्रेट – Sourya Online
सौर्य अनलाइन २०७० जेठ ३१ गते २३:३४ मा प्रकाशित
‘मानिस मासिए भने पृथ्वी पाँच वर्षभित्र फेरि हराभरा हुन्छ, किरा मासिए भने पृथ्वी त्यति नै समयमा पूरै उजाड हुन्छ ।’
पछिल्लो समयमा मानिसले गरेको पर्यावरण विनाश देखेर वैज्ञानिकले यस्तो आँकलन गरेका हुन् । पर्यावरणका लागि मानिस सबभन्दा ठूलो खतरा भएको छ । बरु किराहरू पर्यावरण–मैत्री सावित भएका छन् ।
सृष्टिको ‘सर्वोत्कृष्ट’ प्राणी मानिस सृष्टिका लागि अभिशाप होइन, वरदान हुनुपर्ने हो । मानिसले विज्ञान र अध्यात्मलाई एकसाथ अपनाएमा सृष्टिको कायाकल्प हुनसक्छ ।
पण्डिचेरीका सन्त श्री अरविन्दले धर्तीमा स्वर्ग उतार्ने सम्भावना पहिल्याएका छन् । मानिसले धर्तीलाई स्वर्ग बनाउन सक्छ । मानिसमा सही आध्यात्मिक रूपान्तरण भएमा धर्तीलाई रूपान्तरण गर्न सम्भव छ । यो श्री अरविन्दको अटल आस्था हो ।
श्री अरविन्द भन्छन्– यो केवल आशा होइन, बरु सुनिश्चित नै हो प्रकृतिको पूर्ण रूपान्तरण हुनेछ । कसरी ?
मानिस अझै विकसित हुँदै छ । बाँदरबाट विकसित भएको मानिसले अझ एउटा फड्को मार्दै छ । अरविन्द भन्छन्– मानव उद्विकास रोकिएको छैन । जनवारहरूको बीचबाट मानिस प्रकट भएझैँ मानवजाति विकसित हुँदै महामानव हुनेछन् ।
त्यसबेला मानिस बृहत्तर क्षितिजभन्दा बृहत्तम हुनेछ, विशाल सगरमाथाभन्दा विशालतम हुनेछ, गहन सागरभन्दा गहनतम हुनेछ । तब मासिले सबै कुरालाई महजस्तै मीठो बनाउनेछ, धर्तीलाई दिव्य बनाउनेछ र धर्तीमा स्वर्ग उतार्नेछ ।
ब्रह्म सत्यम् जगत् मिथ्या ?
आजसम्मका सन्तहरूले आºनो मोक्षको चाहना राखे । पृथ्वीको सरोकार राखेनन् । ब्रह्म सत्यम् जगत् मिथ्या । अर्थात् केवल ब्रह्म सत्य हो जगत् झुट हो । शंकराचार्यले अद्वैत वेदान्तका नाममा यस्तो गलत धारणा विकसित गरे । जसले गर्दा आध्यात्मिक साधनाको लामो कालखण्ड खेर गयो । व्यक्तिगत आनन्दको प्राप्ति भयो होला तर पृथ्वीका लागि कुनै प्रकारले उपलब्धिमूलक भएन । सन्तहरू गुफामा तपस्या गर्ने र त्यहीँ बिलय हुने क्रम चलिरह्यो । यो पलायन प्रवृत्तिले गर्दा आध्यात्मिक साधनामै खोट लाग्यो । साधना भनेको जोगीले, संसारबाट विरक्त भएको मानिसले अपनाउने बाटो हो भन्ने भ्रम पैदा भयो ।
श्री अरविन्दले फरक सोचको विकास गरे । आध्यात्मिक सिद्धि मात्र पर्याप्त छैन, भौतिक सिद्धि पनि उत्तिकै आवश्यक छ । शरीर भौतिक भएको हुँदा यो भोगोन्मुख हुन्छ, आत्मा चैतन्य भएको हुँदा यो परम सत्यको भोको हुन्छ । यी दुवैको सन्तुलनमा दिव्य जीवन सम्भव छ । यो सन्तुलन खोज्न श्री अरविन्दले भने, ‘म पृथ्वीसँग सरोकार राख्छु, संसारभन्दा परको लोकसँग मलाई चासो छैन । भौतिक सिद्धि नै मैले खोजिराखेको छु, सुदूर शिखरहरूको उडान होइन ।’
सत्य फेला पार्न जगत् छाड्नुपर्दैन, आत्मा साक्षात्कार गर्न जीवन त्याग गर्नुपर्दैन, दिव्यतासँग एकाकार हुन संसार त्याग्नुपर्दैन, कुनै खास सम्प्रदायमा आस्था राख्नुपर्दैन । परम सत्य सर्वत्र उपलब्ध छ, सबै वस्तुमा विद्यमान छ । यदि, हामीले आनन्दको परम स्रोत आफँैभित्र फेला पार्दैनौँ भने हामीले खोज्ने यथोचित प्रयत्न नगरेर हो । समय र परिस्थितिले श्री अरविन्दलाई अध्यात्मको जगत्मा डोर्‍यायो । उनको जेल जीवन यो मोडको एउटा मुख्य कारण देखिन्छ ।
आज सरकार नामको संयन्त्र या त अपराधीहरूको संरक्षक बनेको छ या कानुनको आवरणभित्र रही अपराध गर्नेहरूको अखाडा । निरपराधहरूलाई जेलको चिसो छिँडीमा पुर्‍याउनु र सत्ता टिकाइराख्नु सत्ताधारीहरूको स्वाभाविक धर्म भएको छ । श्री अरविन्दलाई तत्कालीन शासकहरूले अलीपुर बम काण्डमा संलग्न भएको भन्ने झुटो आरोपमा जेल हाले ।
त्यतिखेर भारतीय स्वतन्त्रताका लागि दिलोज्यानले लागिपरेका श्री अरविन्द नराम्ररी बिथोलिए । चोरलाई चौतारी साधुलाई सुली ! आफूलाई स्वतन्त्रता सेनानी सम्झने र स्वदेशलाई विदेशीको पञ्जाबाट मुक्त गर्ने अठोट लिएका श्री अरविन्दलाई नियतिले जेल हालेको थियो त ? के परम सत्ताले श्री अरविन्दको भूमिका बुझ्न सक्दैनथ्यो ? ईश्वर छ भने उनीमाथि यत्रो अन्याय हुँदा र स्वतन्त्रताको लडाइँको काम बिथोलिँदा के हेरेर बसेको थियो ?
आफूमाथि नियतिको यो अन्याय र अविवेकी खेलले श्री अरविन्दलाई निकै पीडा भयो । जेलभित्रै श्री अरविन्दले गहन चिन्तन–मनन गर्न थाले । उनलाई जेलमै परम सत्यको केही साक्षात्कार भयो । कुनै अदृश्य सत्ताले उनलाई भन्यो, ‘तिम्रा लागि के ठीक हो भन्ने कुरा परम सत्तालाई भन्दा तिमीलाई थाहा होला र ? जे भइरहेको छ भलाइकै लागि भइरहेको छ । तिमी छिट्टै जेलमुक्त हुनेछौ । परम सत्ताले तिम्रो भूमिका अर्थोकै तय गरेको छ ।’
श्री अरविन्दको रूपान्तरण
नभन्दै श्री अरविन्द एक वर्षपछि जेलबाट छुटे । उनीमाथि लगाइएको आरोप झुटो सावित भयो, उनलाई स–सम्मान रिहा गरियो । यद्यपि, उनी फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किएनन् । जेलभित्र भएको साक्षात्कारले उनलाई आध्यात्मिक खोजी गर्न प्रेरित गरिरहेको थियो । उनी आततायीहरूबाट सुरक्षित रहन केही साथीको सहयोगमा पण्डिचेरी पुगे । संस्कृत भाषा पढे र योग, उपनिषद्, वेद आदि ग्रन्थहरूको अध्ययन–मननमा जुटे । आध्यात्मिक साधना पनि जारी रह्यो । छोटो समयमै उनले ध्यानको गहन अभ्यास गरे । उनलाई परम सत्यको बोध भयो । उनले बुझे– समग्र जीवन दिव्य जीवन हो । जीवनको उद्देश्य आत्माको विकास हो न कि अहिल्यै वा निकट भविष्यमा मिल्न सक्ने बाहिरी सफलता ।
साधनाको परिपाकपश्चात् श्री अरविन्दको जीवनमा एक रूपान्तरण आएको थियो ।
त्यसपछि बल्ल उनले देखे कसरी आध्यात्मिक साधना पलायनवादी बाटोमा लागेको रहेछ भनेर । उनलाई हेक्का भयो परम सत्ताले उनका लागि तय गरेको भूमिका यही हो : आध्यात्मिक साधनालाई सही दिशामा ल्याउने । उनी आफूलाई समग्र मानव जातिको मार्गदर्शकका रूपमा देख्न थालेका थिए । समग्र मानव जातिलाई दिव्यताको साक्षात्कार गराउने उनको ध्येय बन्यो ।
उनले भने– म दृढतासाथ विश्वास गर्छु, अस्तित्वले मलाई दिएका उपलब्धि, प्रतिभा, शिक्षा र भौतिक साधन सबै उहाँकै हुन् । परिवार पालनको लागि जति आवश्यक पर्छ त्यति मात्र मेरो हो, बाँकी सबै अस्तित्वकै सेवाका लागि उपयोग हुनुपर्छ । यदि, मैले सुखसयल र भोगविलासका लागि खर्च गरेँ भने म चोर हुँ ।
श्री अरविन्दले पण्डिचेरीमा आश्रम स्थापना गरे । उनी घन्टौँ ध्यानमा बस्थे । १२ वर्षसम्म त उनी पूर्णरूपले एकान्तबास बसे, साधनाका लागि । त्यसपछि पनि उनी प्राय: एकान्तमै रहन मन पराउँथे । यद्यपि, उनले आºनो शिष्यहरूलाई पत्रमार्फत मार्गदर्शन र दीक्षा दिने गर्थे । श्री अरविन्दका यिनै पत्रहरू लेटर्स अन योगलगायत अन्य विभिन्न ग्रन्थका रूपमा प्रकाशन भएका छन् ।
लाइफ डिभाइन अर्थात् दिव्य जीवन श्री अरविन्दको दर्शन हो । सम्पूर्ण जीवन दिव्य जीवन हो । योग एकाध घन्टा शरीर दोब्य्राउने कसरत मात्र होइन । योगको बृहत्तर भूमिका छ । सम्पूर्ण जीवन योग हो । आशक्तिरहित भई कर्मशील हुँदा हाम्रो योग साकार भएको हुन्छ । यो दृष्टिले काम गर्न आरम्भ गर्ने हो भने धर्तीमै जीवनलाई दिव्य बनाउन सकिन्छ । केवल हामीले हेर्ने दृष्टिकोण उपयुक्त हुनुपर्छ । दिव्य जीवन सम्भव छ ।
व्यक्ति, वस्तु वा कामलाई यो आध्यात्मिक र त्यो भौतिक, यो वन्दनीय र त्यो त्यज्य, यो प्रिय र त्यो अप्रिय भनी भेददृष्टि नराखी समग्र जीवन र यसका गतिविधिमा दिव्यता देख्न सक्नु प्राथमिक चरण हो । यही अभ्यासका क्रममा व्यक्ति रूपान्तरणलाई आत्मसात गर्न सक्षम हुन्छ ।
कर्मयोग, ज्ञानयोग र भक्तियोगलाई एकसाथ समन्वय गर्नु श्री अरविन्दको विशेषता हो । श्री अरविन्दले यसलाई पूर्ण योग भन्छन् । पूर्ण योगको लक्ष्य हो समग्र जीवनलाई दिव्य जीवन बनाउनु । समग्र जीवन योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो र भक्ति योग हो ।
श्री अरविन्दका कृतिमा सिन्थेसिस अफ योग, सावित्री, द लाइफ डिभाइन, लेटर्स अन योग मुख्य हुन् ।
जीवनलाई अनन्य प्रेम गर्ने दार्शनिक श्री अरविन्दले समग्र जीवनलाई योगमा रूपान्तरण गराउने व्यवस्थित प्रणाली विकसित गरेका छन् । कर्मयोगी श्री अरविन्द भन्छन्– अरूले देशलाई जंगल, पहाड, मैदान र नदीनाला सम्झन्छन्, म देशलाई आºनी आमा मान्छु । उनको पूजा गर्छु, मातृभक्तिमा जस्तो जीवनको आनन्द मैले अरू कुरामा भेटेको छैन ।
हरेक व्यक्तिले मातृभूमिप्रति प्रेम विकसित गर्न सकुन् भन्ने श्री अरविन्दको अभीष्ट हो । यो सदीक्षा मनमा जागृत हुन्छ भने यसले साकार रूप लिन असम्भव पनि छैन । केवल हामीले आºनो वास्तविक क्षमताको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो वास्तविक शत्रु हामीबाहिरको कुनै शक्ति होइन । हाम्रो आºनै रोइलो, कमजोरी, कायरता र स्वार्थीपना, हाम्रो पाखण्ड र अन्योलग्रस्त ‘सेन्टिमेन्टालिटी’ नै हाम्रा मुख्य शत्रु हुन् ।
जीवनका अनन्त सम्भावना पहिल्याउने महनीय व्यक्तित्व श्री अरविन्दप्रति भावविभोर हुँदै विख्यात कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरले लेखेका छन्, ‘धेरै पहिला अरविन्दमा यौवनको उत्ताल ऊर्जासहितको नायकीय व्यक्तित्व देख्दा मैले गाएको थिएँ : ‘अरविन्द, रवीन्द्रनाथको नमन स्वीकार गर ।’ आज मैले उनलाई प्रज्ञाको प्रशान्ततामा देखेँ र मौन भाषामा भनेँ : अरविन्द, रवीन्द्रनाथको नमन स्वीकार गर ।’
नेपालमा पनि श्री अरविन्द आश्रम खुलेको छ । गुल्मीका चन्द्रमणि भुसाल यसका संस्थापक हुन् । १२ वर्षमा घर छोडेका चन्द्रमणि भुसाल भारतका विभिन्न सहरमा गुरुकुलीय पद्धतिबाट संस्कृत भाषा र धर्मग्रन्थ पढ्दै २० वर्ष बिताए । उनको ज्ञानको प्यास मेटिएको थिएन । संयोगले उनको हातमा श्री अरविन्दको बेसिस अफ योग नामको पुस्तिका पऱ्यो । त्यो पुस्तकमा श्री अरविन्दले अध्यात्म र योगको नयाँ परिभाषा दिएका थिए । ज्ञान, कर्म र भक्तिको ºयुजनबाट मात्र सही आध्यात्मिक जीवन सम्भव छ । श्री अरविन्दको यो विचारले चन्द्रमणि भुसाल भित्रैदेखि प्रभावित भए ।
त्यही पुस्तकमा उल्लिखित ठेगाना पछ्याउँदै भुसाल पण्डिचेरीस्थित श्री अरविन्द आश्रम पुगे । त्यहाँ उनी कर्मयोग र साधना गर्दै १२ वर्ष बसे । चन्द्रमणि भुसाल अब स्वामी रामचन्द्र दास भइसकेका थिए । अन्तत: स्वदेशको सम्झनाले उनको मनमा स्पर्श गर्न आइपुग्यो । उनका आध्यात्मिक शुभेच्छुक निरोद्दाको सल्लाहअनुसार अरविन्द आश्रम स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएर उनी स्वदेश फर्किए ।
केही समयमै उनले थानकोटमा एउटा घर र केही जमिन किनेर श्री अरविन्द योग आश्रम स्थापना गरे । समयक्रममा आश्रमको भौतिक सम्पत्ति विस्तार हुँदै गयो । आश्रममा बस्नेहरू पनि बढे । विद्यालय खुल्यो । आय आर्जनका लागि विभिन्न कुटिर उद्योग खुले ।
हाल आश्रम २२ रोपनी जमिनमा फैलिएको छ । चन्द्रागिरिको काखमा रहेको यो आश्रमबाट हिमालका उत्तुंग शिखरहरू र तल राजधानी सहर हेर्न सकिन्छ । जंगलको नजिक भएको हुँदा हावापानी स्वच्छ र शीतल छ । नवलपरासी र गुल्मीमा आश्रमले शाखाहरू खोलिसकेको छ ।
आश्रमले आजभोलि योग साधना, सामूहिक जीवनशैली र कर्मयोगलाई आत्मसात गरी बीस वर्षदेखि जैविक खेती, गाईपालन, सिलाइ—बुनाइ, थाङ्का चित्रकला, अगरबत्ती, पस्मिना उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको छ । आश्रममा हाल दुई सय जना युवायुवती र विद्यार्थीलाई आधारभूत आवश्यकताका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र आध्यात्मिक साधनाको वातावरण उपलब्ध भएको छ । आश्रमले अनाथ, गरिब र असहाय बालबालिकालाई आश्रय दिएको छ र आत्मनिर्भरता सिकाएको छ । कसैको दास भएर बस्न पर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिलाउनु एउटा उल्लेख्य काम हो । सादा जीवन, कर्मशीलता र सिर्जनशीलता आश्रमका विशेषता हुन् ।
नेपाली युवा स्वदेशमा भविष्य नदेखेर विदेशका खाडीहरूको तातो बालुवामा पसिना बगाउन बाध्य भएको समयमा श्री अरविन्द आश्रमले युवा र बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराउनु प्रशंसनीय कार्य हो । आश्रमले कर्मवीर नेपालीहरूको प्राचीन संस्कृतिको जगेर्ना गरेर सम्पूर्ण नेपालीका लागि उदाहरणीय कार्य गरेको छ ।
आश्रममा एकै थलोमा कृषि, उद्योग, कला, संस्कृति र योग साधना र सामूहिक जीवनशैलीको अभ्यास देख्न पाइन्छ । आश्रमका संस्थापक एवं सञ्चालक स्वमी रामचन्द्र दासले आश्रममा जीवनलाई रूपान्तरण गर्न कर्मयोग र आत्मनिर्भरता अपनाइएको बताउँछन् । आश्रमले कसैसँग दानको याचना गर्दैन, आफैेंले आयस्रोत जुटाउँछ र भौतिक आवश्यकताका वस्तु उत्पादन पनि गर्छ । स्वेच्छाले कसैले सहयोग गर्छ भने त्यो लिन्छ तर कुनै सर्त स्वीकार गर्दैन ।
आध्यात्मिक विकासका लागि कर्म र सिर्जनामा जोड दिइएको छ । आश्रमका कलाकारले भरतनाट्यमलगायत शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत गर्छन् । स्वस्थ मनोरञ्जन दिने र पूर्वीय संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने आश्रमको ध्येय हो ।
श्री अरविन्द आश्रम एउटा सानो संसार सिर्जना गर्ने प्रयत्न हो जहाँ मानिसहरू गाँस, बास र कपाससँग र जीवनका सबै सामान्य आवश्यकतासँग व्यस्त नभई बाँच्न सकुन्, ताकि मानिसका ऊर्जाहरू सुरक्षित भौतिक अस्तित्वको सुनिश्चितताका कारण मुक्त भएपछि स्वत:स्फूर्त रूपमा दिव्य जीवन र आन्तरिक अनुभूतितर्फ फर्किउन् ।
सहरको धूवाँ, धूलो र कोलाहलमय वातावरणबाट मुक्त भई प्रकृतिको सान्निध्य अनुभूति गर्न र आध्यात्मिक आनन्द लिन आश्रम सही गन्तव्य हुन सक्छ ।